Weerar argagixiso oo Muslimiin ah oo ka dhacay lix meelood oo ku yaal Vienna | Apg29
Dad badan oo dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa la soo sheegayaa. Mid ka mid ah argagixisada ayaa sidoo kale qarxiyay qarax ismiidaamin ah.
Fiidiyowgaan waxaa lagu arkay gacan ku dhiigle tooganaya.
Maaha maalmo badan kahor, weerar argagixiso oo argagixiso oo muslimiin ah ayaa kadhacay kaniisad katoolik ah oo kutaala magaalada Nice .
Magaalada Avignon oo 250 Km u jirta magaalada Nice, waxaa lagu dilay nin muslim ah ka dib markii uu weerar mindi ah ku qaaday dhowr boolis ah.
Weeraradii argagixiso ee muslimiinta ee Vienna
Maanta, waxaa dhacay weeraro argagixiso oo Muslimiin ah . Hadda Vienna lix meelood. Dad badan oo dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa la soo sheegayaa.
Sarkaal booliis ah oo ilaalinayay sunagog ku yaal magaalada ayaa la toogtay oo wuxuu qabaa dhaawacyo nafta halis gelinaya. Hal dambiiluhu waa inuu dhinto midna waa inuu baxsad ku jiraa. Mid ka mid ah argagixisada ayaa sidoo kale qarxiyay qarax ismiidaamin ah.
Weerarradu way soconayaan waqtiga qorista. Dhowr ayaa dhintay. Kuwo badan ayaa dhaawacyo culus qaba qaar badanna waxay helaan daryeel cisbitaal .
Weerarka ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid argagixiso waxaana la rumeysan yahay inay fuliyeen dhowr gacan ku dhiigle.
Kaliya Ciise ayaa badbaadin kara oo samatabbixin kara
Markii weeraradii argagixiso ee ka dhacay Nice iyo Avignon ay dhaceen, waxaan qoray:
Dadku runtii waxay u baahan yihiin Ciise Masiix oo Baybal ah. Markaa waxaa dhammaanaya nacaybka, dilka iyo rabshadaha. Ciise oo keliya ayaa badbaadin kara oo badbaadin kara oo cafiyi kara dembiyada dadka!
Waxaan leeyahay hadalkaas maanta sidoo kale.